Yini izinzipho zakho zikhule ngokushesha? izinzipho Beautiful enempilo
Girls azethembe kakhudlwana nge manicure wekugcina ku izinzipho ezinde. I umkhuba wobulili ebukeka kahle emva izandla zabo - lena akuyona bethanda ahlukile, kodwa ngokudingeka nsuku zonke. Phela, isikhumba sakho kuyinkomba engu yowesifazane, kanye eside, izinzipho eqinile ngaphandle amazwi usitshele impilo kanye nesimo yomnikazi. Imishini Newfangled nginyathela, ukuthandwa okuyinto likhula nsuku zonke, kubenza babe wobuciko unamakhono. Kodwa kunezimo lapho amapuleti elincane nail ayikwazi aqukethe iphethini oyifunayo. Yini izinzipho zakho zikhule ngokushesha? Ekhaya, etotoswayo ngezandla ngokwanele massage, buso nezinye ukwelashwa ubuhle agcine ngokuphonsa ithawula marigolds obuphelele oyifunayo. Nokho, asikho isidingo uthembele yi ngokushesha - ukwanda zemvelo nail ipuleti uyakwazi ukufinyelela kuphela komunye amabili kwangu ngeliviki, engasekho. Ngakho ngaphambilini ngokwemvelo, kodwa ukunakekelwa olunzulu futhi njalo cuticle nesitsha nail has a chance ukuze uthole imiphumela esiphezulu.
Izimbangela fragility marigolds futhi kanjani ukukulungisa
Amandla kanye ubulukhuni ukwanda nobude nail ancike izici ezihlukahlukene: ikhwalithi kagesi (lemali yama-protein izakhi mkhondo ebalulekile), ukungabi imingcele enzima e ukudla (kuncike indlela yokudla ehambisana nempilo), isamba elanele isimo engenayo umswakama yomzimba, isimiso sezinzwa, ithonya izici ezihlukahlukene kwemvelo imvelo. Ngemva ucingo kudokotela futhi ukuthola isizathu esenza izinzipho zakho zikhula kancane, ngokuvamile lwanele ukuba ulungise umbuso futhi yokudla, gwema ukungezwani sezinzwa futhi ukucindezeleka, imikhuba emibi ukuyeka izinzipho exfoliate baphule. I amavithamini ebaluleke kakhulu nail ukukhula, ukukhuthaza ukwakheka eqinile, enempilo, ipuleti, amavithamini ezibhekwa:
A - ngesivinini ukukhishwa amaseli;
C - akunqandi ukuguga yellowing nail;
B - kuqinisa futhi sithuthukisa ukukhula marigold;
E - kuyalithinta antioxidant, asenze nail isakhiwo ngesivinini zamagama kuyi-collagen.
Ngaphezu amavithamini wusizo umsoco nokukhula izinzipho ezidingekayo namaminerali - calcium, i-zinc eningi nokusansimbi. Calcium - main "umakhi", oyingxenye ngezipikili, i-zinc normalizes amaprotheni zamagama kudaleke ukukhula kwezicubu yensimbi ukuntula kuholela kwegazi, izinzipho ziyaqothuka, ngoba lesi sici unesibopho kwegazi igazi kanye nokuhlinzekwa nail amapuleti ngu izinto ezihlukahlukene eziwusizo. Uma Ukudla akuyona Ukuthola amavithamini namaminerali azokusiza, ukuthi ngaphambi kanjani ukusheshisa ukukhula izinzipho ekhaya, udinga iseluleko udokotela ukuthenga WMC (amavithamini namaminerali eziyinkimbinkimbi) futhi baqala engayitholi yalo evamile. Okunomsoco umzimba kusuka ngaphakathi zonke izakhi ezidingekayo isandiso asebenzayo izinzipho, awukwazi bayakhohlwa izimonyo, ukusetshenziswa njalo egqugquzela impilo kanye nokuqinisa ipuleti nail.
Qaphela ukugcwalisa marigold, ekuqedeni imiphetho ebukhali, burrs, nokusiza ukudala ifomu elula, kuba nomphumela omuhle nokukhula ngokushesha kanye amapuleti eqinisa. Ngakho manicure ifayela nail kumele kube plastic noma plastic-iphepha, kodwa hhayi metal. sishaye lesidze kule wensimbi kuzosiza esasile ukusingatha izinzipho, ngaphandle kokulimaza kubo. Yini izinzipho zakho zikhule ngokushesha? Podpilivaya nail, okumelwe senze isiqondiso eyodwa kuphela, ezihambayo ifayela nail kusukela phansi nail ukuze isikhungo salo. Lokhu kuzosiza ukugcina isakhiwo amapuleti, futhi ukusheshisa kumiswa amangqamuzana amasha.
iseluleko Jikelele, noma benzeni ukuze izinzipho zakho zikhule ngokushesha
Ibhizinisi, owesifazane esebenzayo namuhla kungaba yokuyithenga eside silindile ngenxa yemvelo nail isandiso, ngakho efanele ibhizinisi lady waba umthamo professional, esinciphisa isidingo ukuchitha isikhathi esiyigugu. Kodwa zikhona izindlela zokwenza okuncane ebizayo ukufeza nokukhula ngokushesha izipikili. Abanikazi stylish, eside marigold aluleka amanye amantombazane ukulalela izimfihlo ukunakekelwa njalo yezandla zakho. Yini izinzipho zakho zikhule ngokushesha? Ukunakekela zokugeza ngoba izandla nezinzipho, firming imaski ukukhula marigold, upharafini, isicelo of amafutha kanye okhilimu, usebenzisa varnishes ekhethekile wezokwelapha, kanye iziphiwo zemvelo (lemon, ubhamubhamu noma amajikijolo omuncu) - lezi amathuluzi kanye nezinqubo kungaba arsenal onokwethenjelwa umzabalazo eside futhi namandla nail amapuleti.
zikhule ngokushesha marigolds? Ngempumelelo ithuluzi - emathileyi for izandla nezinyawo
Dry, cuticle aqhephukile kuvimbela ukukhula asebenzayo amangqamuzana amasha nail, kusukela le nqubo akunakwenzeka ngaphandle moistening ezinhle. Kuyinto kule ndawo a ukunweba engokwemvelo nail, nokuphela kwamanzi emzimbeni kunomthelela ayeke ekukhuleni kwayo. Avamile amafutha cuticle base amafutha, fat-encibilikayo ngamavithamini A no-E ukuze base oily, unezela amafutha abalulekile kufihla, okhilimu kanye ukuxuba kubo ngemakhilayoni, bese ukucutshungulwa esebenzisa ipuleti nail cuticle kusiza kahle uqale inqubo kuyashesha ukukhula marigold. Ukuze kuqiniswe izinzipho Ungasebenzisa emathileyi izithako elula: 6-7 amathonsi iodine, 30 ml kalamula noma wezipuni kwesigamu uLwandle Lukasawoti (kungenzeka ukuba esikhundleni baking soda) e 200-400 ml amanzi afudumele. Moisturize futhi uqinisa izinzipho, ukusheshisa ukukhula kwabo kuzosiza okugeza amafutha ezikhishwe sekuqala ukufudumala eziyisisekelo - omnqumo, alimondi, ibhilikotsi, ocolisekileyo, Sesame, noma yimuphi omunye. Iconsa ngendlela uwoyela ohlanzekile noma inhlanganisela 5-6 amathonsi glycerol kanye esilinganayo iodine. Isixazululo kwaphumela kuyadingeka ukuze ubambe kalula imizuzu 15-20 ke bangakwazi Sula ngendwangu. Esikhundleni amanzi, pharmacy zabantu weluleka ukunweba izinzipho Iziphungo lisetjenziselwa amakhambi okwelapha: burdock izimpande, chamomile, wort iSt John sika, Linden imbali, arnica nabanye.
The Mask ukukhula ngezipikili cuticles nsuku zonke ukubhucungwa zone
Ngaphambi ukusebenzisa izingoma yokudla okunempilo phezu amathiphu yeminwe nezinzipho, kudingeka asingathe ngokucophelela massage ukunyakaza kwabo. Le nqubo wenziwa nsuku zonke, kakhulu ngcono kwegazi kulendawo futhi kuzosiza bazogcwalisa ngayo amavithamini. Izithelo kanye berry imaski nail ukukhula kungafaka izithelo sesehlile: lemon, ikiwi, apula noma ubhanana. Izipikili kungenziwa wafaka noma izithelo mate imizuzu 10-15. Cranberry, cranberry kanye nezinye amajikijolo ungaba yokwelula noma izingalo ekuphambukeni bese ubamba nabo Vitamin juice imizuzu 10. Abaningi yasendlini nail abalandeli ukujabulela intandokazi cream ingxube (1 li-awa. L.) Futhi esilinganayo paprika. Kumelwe igcinwe ezandleni imizuzu akukho kuka 5, futhi uma kwenzeka kabi - ugeze off ngokushesha. Ngokuba ukulungiswa buso yezimonyo ingasetshenziswa uju iphunga base amafutha (kakolweni lwegciwane, alimondi, burdock, ulwandle lalesi sihlahla nezinye).
upharafini zokulungisa ngengcina yezinyosi
Upharafini kubhekwa indlela ephumelelayo futhi elula yokwandisa kanye nokuqinisa marigolds, enika imiphumela ebonakalayo ezinsukwini ezimbalwa. upharafini Olubunjiwe (esitolo yezimonyo) noma ngengcina yezinyosi ngesimo ukushisa lisetshenzisiwe cuticle. Umthelela le nqubo iyafana uhlikihla - kwandisa ukugeleza kwegazi futhi kakhulu lula ukufinyelela oxygen marigolds. Uma uthenga umkhiqizo abafuyi bezinyosi, kungenzeka ukufudumeza wax namabhati umusi kusihlwa, bese "ofeleba" eqandisiwe ku iminwe amagilavu ukuze indawo yokulala okungenani amahora angu-2-4. Isonto noma ezingu-10 Yiqiniso kaphala- ngcono nail impilo, qinisa ipuleti nokusiza ukufukula yabo.
Ngaphezu zokupheka ethandwa, ezichaza indlela ukusheshisa ukukhula izinzipho ekhaya, ungadikibali ipumelelo umkhakha nail. Ngokwesibonelo, ukubuyisela impilo marigold futhi uqinise isakhiwo amapuleti ukunikela brand ezinhle: Vivienne Sabo, Artdeco noSally Hansen. A-Spanish brand Victoria Shu yezitolo ungajabulisa abathengi flakonchikom- "megastanochnikom" esinesihloko esithi "Ngempumelelo eziyinkimbinkimbi, kuyashesha ukukhula izinzipho."
Indlela yokwenza nail izinga manicure "Blyuskay". izinombolo Isiceshana sokuxuba imibala
Kanjani ukwenza manicure kwesokudla ekhaya? 5 Easy Izinyathelo
Yini ehlukanisa ijeli kusukela sula gel?
Gel sula ngaphandle iphele tube: iqiniso nasezindabeni eziqanjiwe
"Izintatheli zamaphephandaba nazo" manicure - imibono original ekuklanyweni nail
Manicure for girls: Izinhlobo kanye Izinzuzo
Vitaly Proshkin - wasemuva abanolwazi
Ukuvimbela izifo ezingathathelwana. Nokuvinjelwa kwezifo ebuntwaneni
Aileron - roll iphini. aviating
Zeqhwa imali yempesheni - kuyini? Uqondeni ukufriza ukonga yempesheni abadala?
Ake ukubala mangaki ama-calories ku okroshka
Ukulondoloza utamatisi we-cherry - izinto ezincane
Tiutchev inkondlo ukuhlaziywa "Umthombo." Izithombe incazelo yomsebenzi
Indlela ukupheka i omelet ubisi esheshayo futhi esihlwabusayo
Abadlali abakhulu: "Umthetho nomyalelo: I-Special Corps"